Iindidi ezi-5 zebhokhwe ezidumileyo kunye nendlela yokufumana | Amadoda aQinisekileyo
Uninzi lwamadoda luzama iintlobo ezahlukileyo zebhokhwe de ekugqibeleni ifumane eyona ifanelekileyo. Njengazo zonke izinto ezinxulumene nesitayile, Ukubetha iliso lenkunzi yenkomo yinto yokulinga kunye nephutha.
Iikhonkco zinika umhlaba ophakathi phakathi kokucheba okusondeleyo kunye neendevu. Sisisombululo xa ukhetha ukunxiba iinwele zobuso kodwa akukhoxinano olwaneleyo ezidleleni ukwenza iindevu ezipheleleyo. Kukho ke abo bayikhethayo kuba bayithanda ngokungcono indlela ebalungela ngayo.
1 Amaqhina athile
1.1 Iqhina elincinci
1.2 Iqhina elikhulu
2 Gcwalisa amaqhina
2.1 Iqhina eliqhelekileyo
2.2 Ibhokhwe Van Vanke
2.3 Iqhina le-anchor
3 Loluphi uhlobo lweqhina lokukhetha
4 Ungayigcina njani i-knob
Iinxalenye ezinamaqhina zezo zingenazo iindevu. Iinwele zobuso zikhawulelwe kwindawo yesilevu kwaye zinokunikwa iifom ezahlukeneyo:
Ucheba yonke into ngaphandle kweenwele zomlomo osezantsi. Ubude bomgca buxhomekeke kukhetho lomntu. Inokuhlala kwindawo encinci yoxande phantsi komlomo okanye iqhubeke ukwehla ngokuthe nkqo ezantsi kwesilevu ngendlela othanda ngayo. Iinguqulelo ezinde ziyaziwa njengezikhonkwane zembaleki.
Kuya kufuneka unikele ingqalelo kwinxalenye encinci yeenwele zobuso, yiyo loo nto, kuzo zonke iintlobo zebhokhwe, Ngokwendalo le yeyona ifuna ulondolozo oluncinci.
Ikwabizwa ngokuba liqhina langaphambili. Kufana nebhokhwe epheleleyo, kodwa ngaphandle kwamadevu. Indawo ye-chin yenwele ivunyelwe ukuba ikhule ngokupheleleyo.
Ukufezekisa ubume bayo umphezulu ufuna ukufikelela kwikona yemilebe. Kukwabalulekile ukuyicutha kumacala ukuze ibe nobubanzi obufanayo nomlomo kwintetho engathathi hlangothi.
Iimbambo ezipheleleyo zezo ziqulathe zombini iindevu kunye nebhokhwe. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kubume bazo, nokuba la macandelo mabini adityanisiwe na okanye hayi. Zidla ngokuthopha ngakumbi kunamaqhina enxalenye.
Amadevu kunye nebhokhwe kufuneka zidityaniswe zenze isangqa esingagqabhukiyo okanye isikwere esijikeleze umlomo. Kuzo zonke iintlobo zeqhina, oku kunjalo isitayile phantse wonke umntu ucinga xa ethetha ngamaqhina.
Njengazo zonke ezinye, ibhokhwe endala inokunxitywa imfutshane, iphakathi okanye inde. Cinga ngokuyicutha kwaye unqamule imilebe esezantsi esilevini kwiziphumo ezichazwe ngakumbi.
Uhlobo lweVan Dyke luyafana nebhokhwe epheleleyo, umahluko okhoyo Amadevu kunye neebhokhwe azixhunyiwe. Cinga ngalo ukuba unzima ukufumana isangqa esipheleleyo seenwele okanye ukuba ujongeka uthandwe ngakumbi yile ndlela.
Ukufezekisa ubume bayo obunxantathu obwahlukileyo, ibhokhwe kufuneka icutheke kuneemadevu. Kwiinguqulelo ezinde, ubume obunxantathu obuguquliweyo bufezekiswa ngokusika iqhina ukuya kwinqanaba ngoncedo lwesikere.
Kule ndlela iimbovu kunye neebhokhwe zikhutshiwe, kodwa, ngokuchaseneyo nokwenzekayo ngeVan Dyke, nantsi ububanzi beebhokhwe ekufuneka zidlule komlomo hayi ngenye indlela. Ngele ndlela, Ubume obukhumbuza iankile butyathwa ngeenwele zobuso.
Yibhokhwe evela 'kwi-Iron Man'. Umlingisi uRobert Downey Jr. ligorha lolu hlobo lweebhokhwezombini ngaphambili nangasemva kweekhamera.
Loluphi uhlobo lweqhina lokukhetha
Uhlobo olufanelekileyo kakhulu lomntu ngamnye luxhomekeke kubume bobuso. Umzekelo, ubuso obujikelezileyo buhlala buxhamla kwiincakuba ezinde, ezi-tapered. Kwelinye icala, ukuba unobuso obude, ngumbono olungileyo ukucinga ngokuthe tye. Ukuba olo luhlobo lobuso bakho, awugcini ubude bakho beebhokhwe, ubuso bakho bunokubonakala bunqabile.
Nangona kunjalo, ngelixa zizikhokelo ezilungileyo zokufumana iibheringi zakho ekuqaleni, akonelanga. Kwaye kufuneka uthathe ingqalelo ii-angles kunye namagophe omlomo, isilevu nomhlathi, ezizodwa kwindoda nganye. Kwakhona, kufuneka uvumelane nohlobo lokukhula. Onke amadoda akanazinwele zobuso ezisasazwa ngendlela efanayo, kwaye xa esenza njalo, ahlala enexinano ezahlukileyo. Ke ngoko, Nguwe kuphela onokumisela ukuba zeziphi eziqhina zingasentla ezichanekileyo.
Ungayigcina njani i-knob
Nokuba ngesilevu sokucheba okanye ngesikere, amaqhina kufuneka achetywe rhoqo. Ngaphandle koko, ibhokhwe engenasiphako inokutshintsha ngokukhawuleza ibe yinto engafunekiyo nengathandekiyo.
Nangona kunjalo Amadevu kunye nebhokhwe zihlala zihlala zilingana, ayisiyomfuneko ibalulekileyo. Elinye icandelo linokushiywa ixesha elide kancinci kunenye ukufezekisa eyona milo intle ebusweni bakho.
Ukugcina ukuma kwayo kubalulekile njengokuyicoca. Ukuyilinganisela ngendlela ekhethiweyo, udinga i-razor. Izinto zokucoca umbane kunye neencakuba zinokuwenza nawo umsebenzi. Nje ukuba isitayile esikhethiweyo sitsaliwe, kulula kakhulu ukusigcina.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iindidi zeqhina
Prostatitis: oonobangela, isifo, unyango kunye nothintelo